I-heroine ye-classic i-Soviet film classic, uTosya Kislitsyna, yayifuna ukuba nobuhle obunjalo kangangokuthi yayizofaka wonke amadoda emilenzeni ezinyaweni zakhe. Kodwa ubuhle bodwa bukwazi ukulwa namadoda lapho? Wonke owesifazane unezindlela nezindlela zakhe siqu. Ngenhlanhla, inkolelokazi yesifazane icebile kakhulu kangangokuthi inani lezindlela zokunqoba umuntu alinamkhawulo. Kodwa ingabe zonke ziyasebenza, zifanele futhi zijabulise amadoda? Vumela la madoda ngokwayo athi lokhu. Ngesikhathi esifanayo, futhi uzwela kubo, yizindlela zamakhosikazi ezenza ngazo ngokumangalisayo. Futhi akeke ukwamukelwa kokumiswa kwabafundi akuyona into ethembekile kunazo zonke, kodwa amadoda amaningi ayajabula ukuba "akhohliswe" uma kwenziwa kahle.
Izici zesifazane ezingu-6 ezilwa namadoda endaweni
Bonke abantu benza ukuthanda nokuthandayo, kuhlanganise. kanye nabesifazane, ngenxa yezici eziningi. Futhi bekuyoba umthwalo futhi ongenalutho ukuqoqa ifayela engokwengqondo kuwo wonke umuntu owawuthandayo ukuthi ukuziphatha kowesifazane kuyombhubhisa kanjani ncamashi. Yiqiniso, uma kunesikhathi, ithuba, futhi okubaluleke kakhulu - isisusa, khona-ke lokhu kungasebenza kakhulu. Kodwa uma uyidinga ngokushesha futhi ngokunembile, kuzodingeka ukhiqize izintandokazi zabo bonke abantu bese uthola ifomula elilodwa elizosiza ukubeka umuntu onentshisekelo ku-"scapulae", embhedeni noma okungenani "emasakeni" ahlezi kahle e-altare elingenalutho. Ukuze senze lokhu, sihlola izinkundla zamadoda, lapho abantu abaneminyaka yobudala ehlukile, isimo nesimo somshado babelana ngemibono yabo mayelana nezintambo eziyinhloko zesifazane eziholwa kuzo, njengokungathi zikhonjiswe.
Sizokwenza kuphi isihenqo?
Amadoda amaningi ayenze inzuzo enkulu ekunqumeni ukukhetha kwabo, okuthiwa isilinganiso esihle kakhulu sezingxenye ezithandekayo zomzimba wesifazane. Amathuba amaningi okukhangisa amadoda yilabo besifazane abancane, ababukela ngokucacile ushintsho olucacile phakathi kwesifuba, okhalweni kanye nezinqulu. Futhi kukhona incazelo yesayense yalokhu. Kwenzeka ngokomlando ukuthi amadoda asezingeni lobufuzi afunde ukulingana okunjalo njengekhodi eqinisekisa ukuthi owesifazane unempilo enamandla, ukuzala, uyakwazi ukubekezela ngokuphepha futhi abelethe inzalo. Ngakho-ke, abesifazane, labo obanikezwe uhlobo oluthile oluthile "uhlobo lwe-hourglass", akwanele ukuba bangafihli amafomu abo. Futhi labesifazane, abanesibalo esincane esingasetshenziselwa ukuguqulwa kwesifuba, kuzodingeka bathathe iseluleko kuma-stylists, futhi bebukeka ngosizo lwezingubo zokugqoka nezesekeli benza lezi zingxenye ezithakazelisayo kakhulu zomzimba wazo ezivelele kwabesilisa.
Izwi le-bewitching le-Siren
Ingabe izinga lezwi lesifazane lithinta amadoda? Bobabili amadoda ngokwabo kanye nezifundo zesayensi bathi banakho, kakhulu. Abesifazane nabo balalela isithwathwa samadoda, ukukhetha, njengombuso, abanikazi bezwi eliphansi nelijulile. Izwi elinjalo lenza indoda emehlweni abesifazane abavelele, abahle kakhulu futhi bephakeme, kungakhathaliseki ukukhula kwangempela. Ngombono wesilisa isithombe esifanayo. Abesifazane abanamazwi aphezulu bazwa bebancane, bengenakuzivikela futhi bebathinta. Yiqiniso, asikho emlandweni wezinganekwane, futhi izwi elimboza indlebe yendoda ayihlanganiswa nanoma yimuphi umshicileli, kodwa kungenzeka ngempela ukumnika ubujamo bezocansi namanothi amema, njenge-Ancient Greek Sirens. Kuyindaba nje yesifiso nokuqeqesha.
Amadoda athi angakwazi ukwamukela ukuhluleka kowesifazane ukupheka, abe ngumthandi omuhle ngisho nomama, kodwa abasoze bamthethelela isimo sakhe esingalungile. Owesifazane okhalipha, akafuni ukuphendula, ukulalela izidingo zomuntu nezifiso, uthatha indawo yokugcina ekulinganisweni kwamakhosikazi angase abe khona. Futhi uma ngenxa yabantu sesilungele ukushintsha imingcele yethu yomzimba, khona-ke kumelwe sibhekane nomlingisi ncamashi. Manje kunanini ngaphambili, ukuqeqeshwa nokubonisana kwezazi zengqondo kuyatholakala, futhi i-intanethi kanye namashalofu ezitolo zezincwadi zigcwele izincwadi ezikhethekile ezisiza ukuthuthukisa uhlamvu lwegolide.
Indlela amadoda ahlobana ngayo ukwakheka kwabesifazane. Kusuka kumbono wesifazane - kuhle. Uma kungenjalo, kungani bechitha amahora amaningana ngosuku empini? Abantu bacabangani ngalokhu? Yebo, amanye amadoda athande ngempela ukwakheka okubambekayo okugcizelela ngokucacile amehlo wesifazane noma izindebe. Kodwa-ke, inhlolovo eyenziwa enye yezindawo ezidumile zokuphola yabonisa imiphumela ngokusho ukuthi abesifazane abangu-139 kuphela kwabangu-1200 abanesithakazelo kumadoda ngenxa yokwenza kwabo okukhanyayo. Amathuba amaningi okubamba ukunakekelwa kwamadoda asebesifazane abakhetha ukwenza nsuku zonke izimonyo ezilinganiselwe nemibala yemvelo namathoni.
Amandla ombala obomvu
Umbala obomvu nawo wonke ama-shades ayo ahlotshaniswa namadoda anesithakazelo, ngakho-ke ayabathanda kakhulu abesifazane abangesabi ukusebenzisa lo mbala empilweni yabo yansuku zonke. Lokhu kuqinisekiswa ngokucwaninga kwezazi zengqondo eYunivesithi yaseRochester. Basikisela ukuthi amadoda akhethe into ayithandayo kusuka ezithombeni ezifakwe ezifomeni ezivela ezimhlophe zibe zibomvu ezigcwele. Eziningi zezihloko ngaphandle kokungabaza kuboniswe izithombe zabesifazane abasha abakhethi ababomvu. Babenesithakazelo nezithombe, lapho abesifazane babegqoka izingubo ezibomvu. Lokhu kuzama kufanele kube ngxabano evumelekile kulabo besifazane abacabangela umbala obomvu ukuba bangabi nhlobo, kungalungile noma kuyingozi. Cabanga ngesimo sakho sengqondo kuye. Uma umbala ukhethwa ukunambitheka nendawo, kuba umgibe wangempela wamadoda.
Amadoda ngokusemthethweni abiza abesifazane ukuthi bakhulume. Khuluma, ungakhulumi! Umbono wokuthi abesifazane kuphela abathandayo ngezindlebe zabo nje inganekwane. Madoda, kuvela, ungakhathazeki nhlobo emlonyeni wamagama abesifazane abadumisa amandla abo, isibindi, ukupha, njll Yiqiniso, ukuphathwa kabi kwamazwi amnandi lapha akukwenzeka. Amadoda kakhulu azinomuzwa wokuthi amanga, futhi kubalulekile ukusebenza kanzima ukuqaphela ukufaneleka kwabo, futhi ngokuhamba kwesikhathi, endaweni kanye nendaba uveza amagama okuqashelwa ngobuqotho. Phakathi kwemisho ebambe kakhulu, amadoda atholakala:
Wena uyiqhawe lami!
Nguwe kuphela ongangiqonda!
Nginani ngisho nasekupheleni kwezwe!
Ngaphandle kwakho angikwazi ukuhlala!
Ukuzivocavoca okuphumula ukulawula imizwelo
Izwi lithinta kanjani abantu?
Imithi yokwelapha inganekwane
Yiziphi izincomo amadoda afana nazo?
I-Hydrogen Peroxide e-Cosmetology
Indlela yokuhlela iholidi emsebenzini
Ama-myostimulators emisipha yobuso
Ama-varicose veins ngesikhathi sokukhulelwa
Yakha isimo sengqondo sonyaka omusha: iseluleko esiwusizo
Kungani kufanelekile ukuzama ucansi wesilwane?